Cabdirashiid: “Farmaajo wuxuu soo kordhiyay sun siyaasadeed” | KEYDMEDIA ONLINE
Cabdirashiid: “Farmaajo wuxuu soo kordhiyay sun siyaasadeed”
Cabdirashiid Khaliif Xaashi, oo ah agaasimahii hore machadka cilmi barista Heritage, ayaa sheegay in xaaladda siyaasadeed ee dalka ay mareyso meel caadi ahayn.
NAIROBI, Keynya - Xog ogaal, Cabdirashiid Khaliif Xaashi, oo bixiyay wareeysi dhinacyo badan taabanaya ayaa sheegay in Madaxda hadda waqtigu ka dhamaaday in ay dalka ku sooo kordhiyeen “Sun siyaasadeed” oo ah in Madaxdii waddanka soo hoggaamisay iyo siyaasiyiinta kasoo hor jeeda oo dhan loogu yeero, cadow, qaran dumis iyo u adeegayaal dalal shisheeye.
Cabdirashiid Khaliif, Farmaajo iyo Kooxdiisa muddadu ka dhamaatay, wuxuu ku sheegay in ay yihiin dad aan loogu talagalin siyaasad iyo hoggaamin heerkaan oo kale ah, wuxuuna sheegay in haddii “Nin aan talin jirin uu taliyo uu tagayo nin aan tagi jirin”.
Wuxuu xusay in talada dalka oo dhan ay hoos taallo hal nin oo xitaa ka mar sarreeya Madaxweynaha, wuxuuna la yaab ku tilmaamay, habdhaqanka gurracan ee afartii sano ee la soo dhaafay kusoo kordhay siyaasadda Soomaaliya.
Farmaajo iyo askarta uu adeegsado ayuu sheegay, in lala xisaabtami karo, wuxuuna kula taliyay in ay ka waantoobaan, falalka fosha xun ee saameynta weyn ku yeelanaya siyaasadda dalka.
Culimada u taagan difaaca kooxda Farmaajo ee waqtigoodu dhamaaday ayaa ugu baaqay in ay aqriyaan sharciyada dalka u yaalla, cilmigoodana ku difaacaan qaranka ee qof jecleysiga iyo qabiilka iska joogiyaan.